Kurapa - Pandawill Technology Co., Ltd.
Iko hakuna indasitiri chikamu uko wedunhu bhodhi kuita uye mhando zvakanyanyisa kutsoropodza.
Pandawill Circuits uye vatinoshanda navo mukugadzira vane nzwisiso yakakosha yematanho uye zvinotarisirwa zvehunhu zvinodiwa nevekurapa uye isu tinovimbisa mashandiro uye kutendeka kwemabhodhi atinogadzira nekupa.
Pandawill Circuits inopa huwandu hwakazara hwehutengesi hunogadziriswa (kusanganisira kokorodzano inotungamira-yakavakirwa HASL inogamuchirwa nevekurapa uye hupenyu hunokosha maficha) uye zvese zvigadzirwa zve laminate (kusanganisira vagadziri vakasarudzwa kana zvichidikanwa).
Kukosha kwekutsvaga kwemabhodhi edunhu ekurapa kwakanyanya uye isu tinokwanisa kupa hwakazara mhando uye yekugadzira odhitaini nzira yemabhodhi ese anopiwa, kusanganisira zvikamu zvemuchinjikwa, masampuli ekushambadzira uye zvikamu zvekuyedza zvinoratidza kushora delamination panguva yegungano.
Edunhu mabhodhi anoshandiswa zvakanyanya pasirese mukushandisa kwekurapa uye Pandawill inoona kuti bhodhi rega rega rakapihwa ndiyo yemhando yepamusoro uye yakagadzirirwa / kugadzirwa kuitira kuti ipe akanyanya mwero ekuita uye akavimbika.